Cabdi Maxamuud Cumar oo inqilaab hoose lagu sameeyay iyo arimaha ku gadaaman - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Cabdi Maxamuud Cumar oo inqilaab hoose lagu sameeyay iyo arimaha ku gadaaman
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa inqilaab hoose lagu sameeyay iyo arimaha ku gadaaman isbedelka lagu sameeyay maamulka dawlada deegaanka.
Waxa si ku meel gaara loogu magacaabay inuu sii hayo Axmed Cabdi Maxamed oo ah gacanyaraha Cabdi Iley kana mida xubnaha fulinta ee ismaamulka.
Cadaadis farabadan oo ismaamulka uga yimi dawlada dhexe ayaa Cabdi Maxamuud Cumar lagu qanciyay inuu booska baneeyo wuxuuse welli ka mid yahay gudiga fulinta oo uu madax ka yahay. Waa diidan yahay inuu Addis ababa tago.
Waxa ilaa shalay soo gaarayay dawlada deegaanka madaxda dawlada dhexe si isbedel loogu sameeyo ismaamulka loona qaboojiyo xaalada iscunka Somalida iyo Oromada oo aargoosi ka bilowdey Diridhaba.
Goobaha Somalida lagu laayay ayaa waxa ka mida xaafadaha ay wada degan yihiin Oromada iyo Somalida ee Diridhaba. Oromada ayaa la soo huriyay ayagoo arkey dhibkii ka dhacay Jigjiga. Waxana laysku raacay in maamulka Oromadu qayb ka yahay qaska kajira Diridhaba.
Isbedelka hoose ee ka dhacay ismaamulka ayaa la sheegay in lagu badbaadinayo Cabdi Maxamud Cumar oo Abiy rabo in lagula xisaabtamo dambiyo ay qoreen kooxaha xuquuqal insaanka.
Waxa Jigjiga soo gaaray ciidan farabadan oo Abiy Axmed soo direy oo la sheegay in lagu dejinayo amniga. Dawlada Itoobiya ayaa qiratey in xaalku ku xun yahay oo ay hadda ku fashi,meen sidii ay ula dhaqmi lahaayeen Cabdi Maxamuud Cumar.
”Ciidanku wuxuu amar ku qabaa inaanu rasaas ku furin dadka oo arinta si nabadgelyo lagu dhameeyo ayaa laga soo xigtey sarkaal Itoobiyaana balse fowdadii dhacdey ayaan welli la hayn khasaaraha dhabta ah ee dhimashada.
Ma rabno in ay isku dhacaan ciidanka Liyu booliiska ayuu sarkaal kale oo Itoobiyaana yiri. Mar labaad waxa kuu muuqata in Abiy Axmed aanu rabin inuu wejiga iska sii fiiqo oo xasuuq balaaran gaysto ayadoo Itoobiya lagu yaqaaney inay Somalida xasuuqdo xisaab la’aan.
Afhayeen u hadley mamulka Oromada ayaa sheegay in muranku aanu ahayn mid u dhexeeya dadka walaalaha ah ee Somalida iyo Oromada inkastoo ficil aan lag arag hadalkiisa.
Wax wara dawlada dhexe kama soo saarin isbedelka hoose ee lagu sameeyay dawlada Somali galbeed ama kilinka shanaad. Ilaa hadda lama garan karo sida xaal noqon doono, waxase muuqata in Abiy Axmed rabin in xaalku ku xumaado asago isbedel ka bilaabey Itoobiya ayna ku kacsan yihiin Tigreegu.
Kulan looga hadlay yaraynta tacadiga haweenka miyiga oo Hargeysa lagu qabtey
Kulan looga hadlay yaraynta tacadiga haweenka miyiga oo ...
Sucuudiga oo Maraykanka siiyay 100 milyan oo lagu aamusiinaayo xasuuqi Kashooqi
Sucuudiga ayaa Maraykanka siiyay 100 milyan oo lagu ...
Muuse Biixi oo ka qayliyay siyaasiyiinta jaamacadaha ka hadlaya
Muuse Biixi ayaa ka qayliyay siyaasiyiinta jaamacadaha ka ...
Puntland oo walaac ka muujisay ajaanibta soo galaya oo xad dhaafay
Puntland ayaa war ka soo saartey tirada soo ...
Wasiirada arimaha dibeda Itoobiya iyo Eriteriya oo Muqdisho yimi: SAWIRO
Wasiirada arimaha dibeda Itoobiya iyo Eriteriya ayaa Muqdisho ...